ajụjụ CLS DC-10-30F Review
2 afọ 4 ọnwa gara aga - 2 afọ 4 ọnwa gara aga #195 by Gh0stRider203
M ga-apụghị ịgha ụgha, na m na a na-akwado nke 3 engine nnụnụ. Always ndidi. Ị ga-adịkarịghị ahụ Me na ihe ọ bụla na-erughị 2 engines.
Nke a bụ a n'ezie dị mma nnunu. abịa na a otutu liveries, n'ezie dị mma zuru ezu, ejiri oké ma e nwere ihe a bit nke a nsogbu na ya ...
Ị na-ahụ, max-nso a nnụnụ na-edepụtara dị ka 6,600 mi; Max Fuel edepụtara dị 36,650 US Gal; na max na-ahụ-anya arọ edepụtara dị 572,000 lbs.
Ma, ọ bụrụ na ị na-ele na FSX ... ọ na-egosi Max oké ibu dị ka 558,000lbs na max allowable mmanụ ụgbọala dị ka 32,368 lita, a dị iche nke 4,282 lita.
Right now m na-eme a 6305.0 nm ụgbọ elu, na m ala 7% ekpe. M na a na cruising na Mach .82 (nke bụ ahụkarị nrughari ọsọ) na 35,000 ụkwụ, na anya na zuru tankị. Ọ baghị uru ikwu ... m na-adịghị etinyecha-eme ka ọ fọdụrụ 4.5 aka elekere w / o nwere iji gbanye mmanu ....
M na messaged CLS ahụ ma ọ bụrụ na ha na-maara nke a, na m na ugbu a na-eche ịnụ azụ.
Ọ mere ihe ILS obibia ma (adịghị eji a autopilot akpa ọchị na ọ bụ um dị iche iche akpa ọchị), ma m na-adịghị atụ anya na ka-esi ike ime.
N'ihi ya, anya ezie .... m ga-enye a nnụnụ a mara mma A- (yeah gbanwere obi m akpa ọchị). Ozugbo m wụnye onye si ebe a site na Thomas Ruth, m ga na-edi a nyochaa na na otu akpa ọchị pụrụ ịbụ a ụbọchị ma ọ bụ ka m na-adịkarịghị ime ihe na-erughị a max-nso ụgbọ elu mgbe ọ na-abịa n'ụgbọ
Nchịkọta ikpeazụ: 2 afọ 4 ọnwa gara aga Gh0stRider203.
2 afọ 4 ọnwa gara aga #199 by Gh0stRider203
ILS bụ pụtara n'ụzọ kwụ ọtọ na a nnụnụ, ekele. N'eziokwu m ji keyboard Ụzọ mkpirisi, ma ka akpa ọchị N'agbanyeghị enweghị nzaghachi si CLS ....
Oge ike page: 0.326 sekọnd